VAKY BANTSILANA : Kajikajy politika…politika maloto | NewsMada
VAKY BANTSILANA : Kajikajy politika…politika maloto
Anisan’ny nahabe adihevitra teo amin’ny tanora teny amin’ny Oniversite tsy miankina iray eto an-drenivohitra ny tsy fananan’izy ireo fanantenana intsony ny hanovan’ny mpanao politika ny fomba ratsy fanaony, fa izay tonga eo, samy manao izay danin’ny kibony. Toa manonofy raha hahita mpanao politika, indrindra eo amin’ny fitondrana ka vonona ny hitsinjo marina ny soa iombonana. Halavirin’izy ireo toy ny fasam-bao aza ny fifanatonana, ny fifampilana hevitra eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka, ny teny ierana izay nanjakan’ny soatoavintsika. Iniana itsahina sy modiana fanina ny fahoriam-bahoaka. Vita kajy ny raharaham-politika…
Fa politika maloto sahady no efa tsinjon’ireo mahita lavitra amin’ny fanaovan’ny fitondrana kajikajy maloto momba ny fifidianana. Tsy ho tafavoaka amin’ny fitsaram-bahoaka amin’ny fifidianana, saingy avo fanombana amin’ny kajikajy amin’ny resaka lisi-pifidianana sy ny tariny. Hahazo laka ny kajikajy politika sy ny politika maloto ? Misoko mangina toa ron-gisa ary tono tsy re hanitra sy nahandro tsy mivoa-pofona tahaka ny « Raharaha Lylison » teny amin’ny fitsarana, no zava-miseho matetika eto. Kapila voahitsaka, vaky vao mahataitra avokoa ny fiaingany eo. Mandeha ny teti-panorony, tafiditra anatin’izany ny tsy fahafahan’ny mpanohitra mikofoka intsony. Miezaka ny mampiaka-peo indraindray, saingy afo mololo, miredareda am-boalohany fa mora levona.
Ho ela fievoka ka ho may lamba satria tsy mivondrona ireo mpanohitra. Variana amin’ny resaka dinika etsy, dinika eroa sy ny fananganana vovonana…Efa halohalika ny ranom-bary, saingy toa mandrimandry manan-draharaha. Kibobo voafandrika angaha ka ny mandrimandry no ahazoan’aina? Hadinon’ny mpanohitra ve ny fahendren-drazana manao hoe : izay mitambatra vato, izay misaraka fasika. Ny firaisan-kina no hery fa izay be no basy. Sao tafiditry ny kajikajy politika sy ny politika maloto ka tsy afa-mikofoka intsony.
Mifanindran-dalana amin’izany rehetra izany, tsy ahitan-teny firy ny solombavambahoaka amin’ny fahoriam-bahoaka, efa mihatra amin’ny ankalan’aina. Marobe ireo latsa-bava fa tsy solombavambahoaka ny ankabeazan’izy ireo fa solombavamihinana sy solombavamanoaka rehefa tonga ny fivoriana ara-potoana. Mba firifiry tamin’izy ireo no mba nisolovava ny vahoaka ka nampiaka-peo fa mihatra aman’aina ny delestazy, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fihanahan’ny kolikoly isan-tsehatra…Sao politikan’ny fampahantrana no tian-kapetraka eto fa tsy fanarenam-piainan’ny vahoaka. Vahaolana vonjitavanandro hatrany no isitrahan’ny valalatsimandadiharona manoloana ny ady amin’ny fahantrana…